काठमाडौं, वैशाख ८ । वान सटमा खिचिएको विश्वकै पहिलो चलचित्र जालेको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।
बिहिबार दिउसो सार्वजनिक ट्रेलर युट्युवमा रिलिज भएपछि यसको भ्यु बढ्दो छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म यो चलचित्रको ट्रेलरलार्इ १७ घण्टामा १ लाख ६० हजार भन्दा बढीले हेरिसकेको छन् ।
यो चलचित्रको युट्युव ट्रेण्डिङ टप स्थानमा रहेको छ । हाल नेपालको ट्रेण्डिङमा छैठौं स्थानमा रहेको भिडियोलाई संकट आइपरेको छ ।
ट्रेलरलाई असफल बनाउनका लागि रसियाबाट आक्रमण भएको छ । रसियाबाट यो भिडियोलाई डिसलाईक गर्ने र यो भिडियोका बारेमा नकरात्मक टिप्पणी गर्ने क्रम बढेको छ ।
रसियनको यस्तो क्रियाकलापले इन्टरनेटमा चलचित्र जालोको नकरात्मक चर्चा हुने संभावना रहन्छ ।
किन गरियो आक्रमण ?
युट्युवमा पोष्ट गरेपछि यो चलचित्रको ट्रेलर निकै चर्चित रहेको छ । युट्युवमा नेपालमा हाल छैठौं स्थानमा रहेको ट्रेलर हिजो रसियामा भने पहिलाे स्थानमा परेको छ ।
तर के पहिलाे स्थानमा हुँदा नै आक्रमणमा पर्यो त ? होइन । यसको कारण भने अर्कै छ । यो चलचित्र एकै सटमा खिचिएको पहिलो नेपाली चलचित्र हो भने विश्वकै पहिलो लामो वानसट चलचित्र पनि हो । त्यति मात्र होइन यो चलचित्रको सिक्वेल पनि एकै सटमा खिचिएको हो ।
तर यसअघि विश्व किर्तिमान राख्न रसियन चलचित्र भने जम्मा १ घण्टा ३९ मिनेटको थियो । २ हजार कलाकार प्रयोग गरेर विश्व किर्तिमान राख्ने उदेश्यका साथ बनाइएको चलचित्र सन् २०१४ मा रिलिज गरिएको थियो । त्यसैले यो नेपाली चलचित्रले उक्त रसियन चलचित्र 'रसियन आर्क' को रेकर्ड तोड्ने भएपछि युट्युवामा यो चलचित्रमाथी आक्रमण सुरु भएको हो ।
हाल यो चलचित्रलाई नराम्रो प्रमाणित गर्न रसियाबाट धमाधम डिसलाइक र नकरात्मक टिप्पणी गर्ने क्रम तीव्र भएको छ । निर्माता तथा निर्देशक अराज केशवले यो चलचित्रको बारेमा नकरात्मक सन्देश फैलाउने उदेश्यले रसियाबाट आक्रमण भएको जनाए ।
नेपालीपत्रसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘रसियाको रेकर्ड तोडिने भएपछि हामीमाथी आक्रमण सुरु भएको हो । तर कुनैपनि व्यक्तीको अथक प्रयासबाट रचिएको सिर्जनामाथी यसरी आक्रमण हुँदा दुखी छु । यो चलचित्रले विश्व रेकर्ड राखेपछि नेपालकै नाम रहने हो । त्यसैले यो चलचित्रमाथीको आक्रमणविरुद्ध सबै राष्ट्रप्रेमी इन्टरनेट प्रयोगकर्तासमक्ष आग्रह गर्दछु ।’
चलचित्रको कमेन्टमा मा रसियनहरुले नकरात्मक टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले भिडियोमा टिप्पणी गर्दै अराज केशव फिल्मस्ले रसियन चलचित्रमाथी केवल खोल ओढेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
त्यस्तै अर्का टिप्पणीकर्ताले पुटिनले युट्युव ल्याएको भन्दै नराम्रो कुरा टपमा आएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
त्यस्तै यही टिप्पणीमा अर्को टिप्पणीकर्ताले पुटिनलाई चोर भन्दै गाली गरेका छन् ।
केही टिप्पणीकर्ताले भने सिनेमामा नेपाल रसियाभन्दा राम्रो रहेको भन्दै तारिफ पनि गरेका छन् भने कोहीले भने यो यात्रा नछाड्नु भन्दै हौसला पनि प्रदान गरेका छन् । चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक अराज केशवले ति बसै कमेन्टलार्इ भने धन्यवाद् भन्दै िटप्पणाी गरेका छन् ।